Types of Learning Styles & Learners
🔹သင်ကြားထားသမျှထဲက ကိုယ်က ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ အထိ တကယ် ရရှိလိုက်လဲဆိုတာက သာ အရေးကြီးတာပါ တဲ့။ 🔹 လေ့လာသင်ယူခြင်းမှာ ကိုယ်တိုင်က ဘယ်လောက်ထိ သင်ကြားပြီးပြီဆိုတာထက် ဘယ်လောက်ထိ ကိုယ်ရပြီးပြီ ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ဘဝအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်တာပါ။ 🔹 ဒီလို အကျိုးရှိရှိ သင်ကြားသလောက် တိုးတက်ရရှိလာဖို့ဆိုတာကလည်း လေ့လာသင်ကြားတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်က ဘယ်လို လေ့လာသင်ကြားခြင်းမျိုးကို ပိုမိုနှစ်သက်သလဲ? 🔹 ဘယ်လို သင်ကြားနည်းစနစ်က ကိုယ့်ကို ပိုမို တိုးတက်စေနိုင်လဲ? လွယ်ကူစွာ မှတ်မိစေနိုင်လဲ စသည်ဖြင့် ကိုယ်တိုင် သိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် ကိုယ်က ဘယ်လို Learning Style နဲ့ဆို အလွယ်တကူ တတ်မြောက်လွယ်တတ်တဲ့ Learner Type လဲ ပေါ့။ ကဲ .. ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Apps to Try if You Want to Try Something New
🔸 တစ်နေ့မှာ SmartPhone သုံးချိန် ဘယ်လောက် ထိ ရှိသလဲ? ဖုန်းသုံးတဲ့အခါမှာရော များသောအားြဖြင့် ဘယ်လို App တွေ သုံးလေ့ရှိကြလဲ? 🔸 အများစုကတော့ Communication ပြုလုပ်ဖို့အပြင် ဂိမ်းဆော့တာ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ကိစ္စ ဖြစ်ပါစေ၊ ကျောင်းကိစ္စဖြစ်ပါစေ Personal Case ဖြစ်ပါစေ Facebook Instagram Messenger Twitter Viber စတဲ့ Apps တွေ အသုံး အများဆုံး ဖြစ်လောက်မှာပါ။ 🔸 ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းထဲမှာ အပျော်သက်သက်၊ အချိန်ဖြုန်းရုံ သက်သက် Install လုပ်ထားတဲ့ Apps တွေအပြင် ကိုယ့်အတွက် အနည်းနဲ့အများ အကျိုးရှိစေမယ့် အကြောင်းအရာ အသစ်တွေကို လေ့လာနိုင်မယ့်၊ အားလုံးအတွက် အသုံးပြုရ လွယ်ကူနိုင် လောက်မယ့် Application လေးတွေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျ။